#CeleYatkwat - Instagram photos and videos
Hashtags #CeleYatkwat for Instagram
Myanmar Idol Season3သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဟာ ဆိုရင် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ခံရ တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် နှစ်ဦးမှာ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက အသက်အရွယ်အရ ငယ်လွန်းတာကြောင့်၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုတွေ ခံစားနေရတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ဇေရဲထက်က အားပေးမိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။'' ဒီကောင်မလေးသည် ၁၉ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းက ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ခံစားချက်တွေရှိတယ်။ ယောက်ျား လေးက တော့ ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ မိန်းကလေးက ကျတော့ အသက်ကလည်း ငယ်တယ်၊ မိဘတွေအုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာရှိတယ်။ ဒီလောက အကြောင်း လည်း မသိတဲ့အခါမှာ ဒီလိုမျိုးကြီးကို ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုမြင်လို့ ကျွန်တော်အားပေးမိတယ်'' လို့ ဆိုပါတယ်။
#CeleYatkwat #celeyknews#celebrity#celebrities #myanmar#Yangon#follow4follow #followforfollow#followme#follow #follows #tag#tagsforlikes#instagram #photography#photo #photos
အလှူအတန်းတွေ လုပ်နေရရင်ကို ပျော်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
*ဗီဒီယိုအပြည့်အစုံကို Cele YatKwat ရဲ့ Youtube မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။*
#CeleYKVideo #video #videos#celebrity #celebrities #myanmar #actor#actress #follow #followforfollow#follow4follow #tag #tagsforlikes#CeleYatkwat #entertainment #instagram#interview
ပါးပါးထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ အဆိုတော်၊ မင်းသား လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သားစိုးရဲ့သားလေး ပန်းသီး (ခ) ထက်အာကာစိုး
ပန်းသီးလေးက စန္ဒရားလည်း တီးပြတယ် .
''အနုပညာရှင်တွေအပေါ် ပရိသတ်ဝေဖန်မှုခံရတာကတော့ ရုပ်ရှင်လောကကြီး အဖြူနဲ့ အမဲ ခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့တာပါပဲ။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ သတင်းစာတွေကနေ တဆင့် တက်ရေးရတာပေါ့နော်။ ခေတ်အဆက်ဆက် တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ဖေ့စ်ဘွတ်ခေတ် ဆိုတော့ လူတိုင်းရဲ့ လက်ထဲမှာ သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ကြည့်လို့ရတဲ့ခေတ်'' လို့ ဆိုလာတဲ့ လူမင်း .
ဘာသာမဲ့ဆိုတာကတော့ ပေါ်ပင်ကောင်တွေလို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် ဒုက္ခရောက်တဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ဒီ့ဘာသာမဲ့ဆိုတာတွေကလည်း ဘုရားကိုတော့ တ ကြပါတယ်"ဆိုတဲ့ ယုန်လေး .
" Cele's OOTD " ဆယ်လီတွေရဲ့ တစ်နေ့တာ အလှဆုံးနဲ့ အမိုက်စား ၀တ်စုံဒီဇိုင်းများ .
Photo - @sanyatimoemyint , @yoonmhimhikyaw77 , @khincoco , @khinthazin , @khin_yupa_
#celeyatkwat #celeykootd #girls #guys #outfitoftheday #ootdasia #ootdasian #love #beauty #instagood #ootdburmese #Myanmar #Yangon #amazing #beautiful #followforfollow #followme #followback #instalove #ootdasia #instacool #makeup #handsome #cool #hairstyles #style #outfitoftheday #dress #beautiful #pretty #confidence #freestyle #tag
"သူတို့က ဆရာမကြီးတွေ။ သူတို့မွေးပြီးတော့ အမေကသာ စုတ်ပြတ်သွားတာ။ သူတို့က very fashionable (ဖက်ရှင်အရမ်းကျတယ်)" လို့ ခေတ်နဲ့သစ်အကြောင်း ပြောပြတဲ့ မေမေ ချစ်သုဝေ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှု အရည်အချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း နေတိုးက အခုလိုပြော လာပါတယ်။ ဒီ သရုပ်ဆောင်ပညာမှာ သက်မွန်ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခု ရှိတယ်လို့ဆက်လက်ပြောပြထားပါသေးတယ်။'' သူ့ပုံစံက အရယ်သံတယ်၊ ခံစားမှုကို တကယ်အစစ်ဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့အားသာချက်က ဟန်ဆောင်မှုကို လုပ်မယူ တတ် ဘူး။ တကယ် ခံစားမှုကို ဖြစ်လာတော့မှ သရုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေက ပိုပြီးတော့ ပီပြင်မှု ပိုရှိတယ်လို့ တော့ ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်'' လို့ ဆိုပါတယ်။
"ဟိုးအရင် သရုပ်ဆောင် ဘ၀ကို ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ
အားပေးကြပါဦး သရုပ်ဆောင်အသစ်လေးကို "လို့ဆိုလိုက်တဲ့ သားညီ
မိခင်အတွက် မွေးနေ့ ပွဲလေး လုပ်ခဲ့တဲ့ နဝရတ်
''အဖေတစ်ယောက်လုံးက ဆေးရုံတက်နေရတဲ့အချိန်မှာ အဖေ့ကို မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း ရိုက်နေရတယ်၊ ကိုယ်က ငိုလိုက်ချင်ပေမယ့် ငိုလို့မတက်ဘူး အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုသားညီနဲ့ ဦးလူမင်းတို့ကလည်း ပုခုံးဖက်ရင်း သူတို့လည်း ငိုရင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုလည်း ငိုတတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တယ်။ ဇာတ်ကား ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်း အဖေ့ကို အရမ်း သတိရတယ်'' ဆိုတဲ့ ထားထက်ထက် .
"အမောဖြေလိုက်ဦးမယ်။ ထပ်ပြီးတော့ ဘာတွေပြောခံရမလဲ မသိဘူး။ ဒီနှစ်တောင် တော်တော်လေးတောင် စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူး ဖြစ်သွားတယ်" လို့ ပြောလာတဲ့ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ (Myanmar Idol အစီအစဉ်ရဲ့ ထုတ်လုပ်သူ) မှ ဒေါ်နန်းမလောက်ဆိုင်
Photo - @warsomoeoo , @eichawpo_malaypo , @ahmoon_official , @they_call_me_b_sox , @khincoco
"ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာလောက်ကို ကျွန်တော်သိပ်မမှုတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော် ၁၄ နှစ်သားေ လာက်ကတည်းက ဒီလိုပဲ တိုက်ခိုက်တာတွေရယ်၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက်တွေရယ် အများကြီး ကြုံခဲ့ရပြီးသွားပြီ။ ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်နဲ့တောင် လုပြီးတော့ ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးသွားပြီ။ ဝေဖန်တာလောက်ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ မပြောပလောက်ပါဘူး။" လို့ ပြောတဲ့ Myanmar Idol Winner ဖြိုးမြတ်အောင်
သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ချစ်တာထက် သမီးလေး နှစ်ယောက်ကို အားပေးချစ်ခင်ကြတာကြောင့်လည်း အတိုင်းမသိဝမ်းသာရတယ်လို့ လင်းလင်း က ပြောပါတယ်။ အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် ကိုလည်း ညဘက် ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ သပေးတယ် လို့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ ချစ်သုဝေရဲ့ မွေးနေ့ အလှူမှာ ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။
'' သမီး နှစ်ယောက်အပေါ်ကို ချစ်ကြ၊ ခင်ကြ မြတ်နိုးကြတဲ့ အပေါ်မှာလည်း အရမ်းကို ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ အရမ်းလည်း ကျေးဇူးတင်သလို ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ သမီးလေးတွေကို ချစ်ပေးကြတဲ့ မိသားစုအပါအဝင် အားလုံးကို ကျန်းမာဖို့၊ နွေးထွေး တဲ့ မိသားစုလေးတွေဖြစ်ဖို့ ညတိုင်း ညတိုင်း မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်'' လို့ သူကဆိုပါတယ်။
"ဒီကလေးတွေမြင်တော့ မခံစားနိုင်ဘူး။ အခု တော်တော်ရင့်ကျက်ပြီထင်တာ။ မရင့်ကျက်နိုင်ဘူး။ သူတို့လေးတွေမြင်တော့ ကွယ်ရာမှာတော့ ငိုမိတာပဲ" လို့ HIV လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂေဟာမှာ မွေးနေ့အလှူမှာ HIV Positive နဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးတွေအကြောင်း ပြောရင်း မျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ
"သူက တကယ်ကိုမှ တော်ပါတယ်။ လူကောင်းပေါ့နော်။ သူ့အသံကိုလည်း ကျွန်တော် ကြိုက်ပါတယ်။ သူနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ်" လို့ ပြောတဲ့ Myanmar Idol Second Runner Up ဇော်ကြီး
"အရင်တုန်းက ကလေးမရခင်က ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမ အပြင်သွားပြီဆိုရင် ဟိုမှာ အဆိုတော် လင်းလင်း၊ ဟိုမှာ ချစ်သုဝေ ဘာညာပြောကြတာပေါ့။ အခုကျတော့ ခေတ်နဲ့ သစ်တို့ရဲ့ အဖေနဲ့အမေ ဖြစ်သွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့က နောက်ရောက်သွားပြီ" ဆိုတဲ့ လင်းလင်း
"မောင်ချိုအမြန်ကျန်းမာလာပါစေ။ အကိုတို့ အဖွဲ့သားတွေအားလုံးက မောင်ချို ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ အကိုတို့က Welcome ပါ။ သူ့အနေနဲ့ ညသန်းခေါင်မှ ရီဟာဇယ် လုပ်နိုင်မယ် တစ်ခေါက်လောက်တော့ ဆိုပါရစေဆိုလည်း အကိုတို့ ထလုပ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါ" ဆိုတဲ့ Myanmar Idol ရဲ့ Executive Manager ကိုစိုင်းဇွမ်ဖာ့
ဗီဒီယိုအပြည့်အစုံကို Cele YatKwat ရဲ့ Youtube မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။*
Photo - @awnseng , @chillax_may , @travelkueen , @msenglu , @myatlay8686
"သီချင်းဆိုပြိုင်နေတာ ဖြစ်ပေမယ့် ပြည်သူ့အချစ်တော် ရွေးနေတဲ့ ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကိုလူတွေ ချစ်နေသ၍ သူကို vote ဖြစ်နေသ၍ ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ ထုံးစံအရသူသည် စင်ပေါ်မှာပဲ ရှိနေမှာပါ" ဆိုတဲ့ ဥက္ကာဦးသာ
"ပြီးခဲ့တဲ့ လက ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးကနေ မိုရီဆာကီဝင်းဟာ ဟောလိဝုဒ် စတားလည်းဖြစ်တယ် ကမ္ဘာမှာလည်း သူ့ကို လူသိသွားပြီ ပြီးတော့ စတီဗင်စပီးဘာ့ဂ် ကနေပြီးတော့ သူဟာ ရုပ်ရှင်မှာလည်း အရမ်းတော်တဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ချီးကျူးစကားပြောတယ်။ မြန်မာပြည်အတွက် ဂုဏ်ယူစရာလည်း ကောင်းတယ်။ဂျပန်မှာလည်း သူ့ကို သိလာကြပြီ။ ဒါကြောင့် သူ့ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွားသံတမန်အဖြစ် ခန့်ရင်ကောင်းမယ်လို့ ညွှန်ကြားလာတဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာပြည်ခရီးသွားဈေးကွက် မြှင့်တင် ရေးအတွက် PR Officer အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ Mr Okuda ကို အဝင်းနဲ့ ချိတ်ပေးပါလို့ အကူအညီတောင်း တဲ့အခါမှာ အဝင်းက ခရီးသွားသံတမန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ဖို့ လက်ခံခဲ့ပါတယ်"လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မင်းထင်က Duwun Media သို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။မိုရီဆာကီဝင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂျပန်ခရီးသွားဈေးကွက် မြှင့်တင်ရေး သံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း အခမ်းအနားကိုလည်း သြဂုတ်လ(၁၈) ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အသက် ၃၀ ပြည့် မွေးနေ့ကို အလှူအတန်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ကစ်ကစ်
"ဒီနှစ်မွေးနေ့ကို ပရိသတ်တွေနဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းမယ်လို့ စဉ်းစားထားတာ။ ဒီနေ့ လှူဖြစ်တာက သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ်တယ်။ န၀ကမ္မလှူတယ်။ သင်္ကန်းကပ်တယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ လှူပါတယ်။ ရေဘေးအတွက်လည်း လှူထားပါတယ်ရှင့်" ဆိုတဲ့ မွေးနေ့ရှင်လေး ဝတ်မှုံရွှေရည်
"သူ့ကို ကျောင်းထားပေးချင်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ မမတို့သွားတွေ့တော့ ဆေးကျောင်းတက်ချင်ကြောင်း ပြောတယ်" လို့ ဆေးကျောင်းသားလေး မောင်ကောင်းပြည့်ကို ကျောင်းထားပေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြတဲ့ ဆုပန်ထွာ
ဆုပန်ထွာက "အရမ်းကောင်းတဲ့ အမကြီးတစ်ယောက်လိုပါပဲ" လို့ ပြောလာတဲ့ မောင်ကောင်းပြည့်
မွေးနေ့ကို ရိုးရှင်းစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဖွေးစိန်လေး...
Photo - @maymyatnoe_may , @tyron_bejay , @ , @they_call_me_b_sox , @msenglu , @lmtjunon
“ကျွန်တော်စီးရတာ မြင်းမလေးတွေ များပါတယ်။ တချို့မြင်းမလေးတွေက သဘောကောင်းတယ်။ တချို့မြင်းမလေးတွေက သိပ်သဘောမကောင်းဘူး။
မြင်းထီးလေးတွေနဲ့တွေ့ရင် မြင်းမလေးကလည်း အပျိုလေး၊ မြင်းထီးလေးကလည်း လူပျိုလေးဆိုတော့ သူတို့ချင်းတွေ့တဲ့အခါ သူတို့ကျူနေတဲ့အခါကျရင် ကျွန်တော် စီးရတာ အဆင်မပြေဘူး" လို့ မြင်းစီးဖြစ်တဲ့
အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်
"တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်တောင် မရှိတဲ့ မှဲ့မျိုးဆိုတော့ နှင်းသွေးရဲ့ Trademark တစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်။ နှင်းသွေးကိုယ်တိုင်လည်းချစ်တယ်။ ဒါက Lucky လို့လည်း ပြောကြတယ်" လို့ Miss Universe Myanmar နှင်းသွေးယုအောင် ပြောပြတဲ့ ရင်ညွန့်က မှဲ့အကြောင်း
အဆိုတော်ဖြိုးကြီး အနုပညာ အလုပ်တွေ သိပ်မလုပ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ် သွားခြင်းမရှိပါဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သူဟာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွေမှာ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောဆိုနေကြသူတွေအပေါ် သူ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို Duwun Media ကနေ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
'' အစ်ကိုကတော့ ဘာမှမပြောချင်တော့ဘူး၊ ပြောပြန်ရင်လည်း ထပ်ဆဲနေကြဦးမှာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ဆဲနေတာတွေထဲကမှ ကောင်းတာ ပြောတဲ့ သူတွေအများကြီးရှိတယ်လေ။ ဥပမာ ကိုယ်အနေအထိုင်မတတ်လို့၊ အပြောအဆိုမတတ်လို့ ဆဲနေတာတွေလည်း ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်။ ဘလိုင်းကြီးဆဲကြတာလည်း ရှိရင် ရှိမယ်။ အမျိုးမျိုးပေါ့နော်'' လို့ သူကဆိုပါတယ်။
"မိန်းမက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခဏတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ ထွက်သွားပြီး ကိုယ်ဝန်က သားလေးလို့
ဖုန်းဆက်လာတော့ မျက်ရည်ဘာတွေ ကျလာတယ်။ သူရောက်လာဖို့ပဲ မျှော်နေမိတယ်။
သီချင်းကလာလိမ့်မယ်။ သေချာတယ် " လို့ လိုချင်တဲ့သားလေးရတဲ့ ခံစားချက်တွေ ပြောပြတဲ့ Fokker
ကြိုးတွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ ခင်လေးနွယ် .
"ဟိုဘက်က တိုက်ခိုက်နေတော့ကျတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေက Fan တွေက ပြန်ပြောမယ်။ အဲဒီကနေ ပြဿနာတွေက တဖြည်းဖြည်း ပိုပိုကြီးထွားလာတယ်ပေါ့။ အဓိကပြောချင်တာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်စိတ်လေးထားပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပေါ့။ မတူရင်လည်း မတူပါဘူး။ နည်းနည်းလေးဆင်တာပါလို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေး ပြောလိုက်ရင် အေးအေးဆေးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားမှာပါ" လို့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ (Park Seo Joon) နဲ့ တူတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် တိုက်ခိုက်ခံရအကြောင်း ပြောပြတဲ့ မျိုးကိုကိုကျော်
"၀ိတ်တက်တာတော့ ကျွန်တော်စားလို့ပါ" လို့ ပြောလာတဲ့ ကောင်းခန့်
အခု ဆရာဝန်က ကျန်းမာရေးအတွက် ဝိတ်ချခိုင်းနေပါပြီတဲ့...
Photo - @warsomoeoo , @ntzee_is_nann_thuzar , @kissgrasss_nann_myat , @arielthuta , @moesetwine_official
သီချင်းတွေ အော်ဆိုနေတဲ့ Roar Roar .. လျှောက်အော်နေတာလေးက ချစ်စရာလေး
မကြာခင်က စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခဲ့ကြတဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုတို့ စုံတွဲကတော့ ပရိသတ်အများကြီးရဲ့ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စေ့စပ်ပွဲကျင်းပပြီးနောက် ပရိသတ်တွေက ပိုပြီးအားပေးခဲ့ကြလို့လည်း ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်း မီဒီယာ တွေရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပိုင်ဖြိုးသုက ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။'' ပရိသတ်တွေ အားပေးကြတယ်ဆိုတာ သုတို့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း လူထဲက လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ ပရိသတ်တွေက လက်ခံပေးကြတယ်။ နားလည်ပေးလာကြတဲ့အတွက်လည်း ပရိသတ်ကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုဏကြီး ကလည်း အနေအေးတယ်၊ သုအပေါ်မှာလည်း အစ်ကိုတစ်ယောက်လို နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်သူပါ'' လို့ သူကပြောပါတယ်။
"လူသိများလာတော့ ကြော်ငြာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီးကမ်းလှမ်းလာကြတယ်"ဆိုတဲ့ မိုးကောင်ကင် အိပ်မက် ထဲမှာဆိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနေရာက သရုပ်ဆောင်ပြီး လူသိများလာတဲ့ပိုးကြာဖြူခင်
မြင့်မြတ်တစ်ယောက်ပျော်နေတာ။ ခြေတွေလက်တွေတောင် တုန်တယ်။ ကလေးကလည်း မချီတတ်နဲ့... ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိတွေ ဖြစ်လို့
"အဖ်ိနှိပ်ခံ ဘ၀နဲ့လာတဲ့သူတွေအတွက် သူတို့ မှာ စိတ်အနာတရတွေ ရှိရင် ရှိမှာပေါ့ ဒါလေးလုပ်ရတာ သူတို့ အတွက် ထွက်ပေါက် ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေါ့ "ဆိုပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာအနုပညာရှင်တွေ အဆဲခံရတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ ဖြိုးကြီး
စိတ်တူကိုယ်တူတာ ရော ၊ဗရမ်းဗတာနေတာရော တူကိုတူမှာပါ၊မတူလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လည်း မွေးရက်တူအောင်မွေးထားရတာဆိုပြီး ဂျင်းကောင်ပေါက်စလေးအကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ ဖေဖေ မြင့်မြတ်
Photo - @yuthandartin , @maytoekhaing , @myatlay8686 , @nang_kae_mar , @nangkhinzayyar
ရွှေလအချစ်ရေးကတော့ သာသာယာယာပါပဲ ကိုယ်တောင် အနှစ်၃၀လောက်ပြန်ငယ်မယ်ဆို သူ့လို အချစ်ရေးလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆန်းသစ်လမိခင် အဆိုတော် မေရွက်ဝါ
အဆိုတော်မေရွက်ဝါနဲ့ သမီးဖြစ်သူအဆိုတော် ဆန်းသစ်လတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အင်တာဗျူးလေးကို Cele Yatkwat ပရိသတ်ကြီး နားဆင်ကြည့်ကြပါဦးနော် ...
မိတ်ကပ်ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း) က မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့ကတည်းက ဘန်ကောက်ကို သွားပြီလို့ သိရပါ တယ်။ ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုတာကို မသိသေးတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေကိုလည်း စောင့်ကြည့်စေချင် တယ်လို့ Duwun media ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။''ဘန်ကောက်မှာ မျက်နှာခွဲမယ်၊ အောက်သွားခေါနေတာကို ပြင်မယ်။ ပြန်လာရင်တော့ စောင့်ကြည့်ပေါ့နော်၊ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ ကိုယ် လည်းသေချာမသိဘူးပေါ့။ ပြင်ဆင်မှုတွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခုပဲ တစ်လ နှစ်လလောက်နေမှ ပုံကျတာလေဆိုတော့ စောင့်ကြည့်ပေးပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူး။ လှချင်လို့တော့ သွားပြင်တာပါ'' လို့ သူကဆိုပါတယ်။
"ဒီနှစ်က အရင်နှစ်တွေထက် ရေပိုကြီးတယ်။ စံချိန်သစ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ပထမရက်တွေက ပဲခူးအနောက်ဖက်ခြမ်း ရေကြီးတယ်။ အဲဒီ ၂၆ ရက်နေ့ညမှာပဲ ပဲခူးမြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်း မုန်တိုင်းဝင်သွားတယ်။ ပဲခူးမှာ ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေများသွားတယ်" လို့ ပြောပြတဲ့ ပဲခူးသားလေး ထွန်းကိုကိုက ရေဘေးအလှူရှင်တွေကို လိုက်ပါကူညီပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်
Fan တွေရဲ့ Birthday Surprise ကြောင့် ပျော်နေတဲ့ မြင့်မြတ်
သြဂုတ်လ၇ရက်နေ့မှာကျရောက်မယ့် မြင့်မြတ်မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ အကြို Suprise ကို နေတိုးရဲ့ Story Book Studio မှာ We Love Myint Myat အဖွဲ့သားတွေက ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မှာ မျက်နှာခွဲမယ်။ပြီးတော့ အောက်သွားခေါနေတာကို ပြင်မယ်ဆိုတဲ့ သုသု
"လူတွေက အထင်မှားကြတယ် ဒီအခြောက် အသက်ကြီးမှ သူငယ်ပြန်နေတာလား ပေါ့။ ဒီအခြောက်က ခေတ်လူငယ်တွေလို တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့တွေလို နေခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစုအတွက် ဘဝတိုက် ပွဲဝင်ပြီးတော့ ထမင်းတစ်လုပ်စားရဖို့အတွက် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်'' လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတဲ့ သုသု
. *ဗီဒီယိုအပြည့်အစုံကို Cele YatKwat ရဲ့ Youtube မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။* .
မိုးစက်​ဝိုင်ရဲ့ Myanmar Heart ပရဟိတအဖွဲ့နဲ့အတူ ပဲခူးတိုင်းရှိ ရေဘေးသင့်ဒေသတွေကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ မိုးစက်ဝိုင်၊ အောန်ဆိုင်း၊ ခါရာ၊ ထွန်းကိုကိုနဲ့ မင်းမြတ်စိုးစံ...
သူတို့အဖွဲ့က အိမ်ခြေ ၄၀၀ ခန့် ရေနစ်မြုပ်နေပြီး အလှူရှင်တွေ သွားဖို့ခက်ခဲတဲ့ ပုကိုင်ကျေးရွာလေးအထိ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်...
Photo - @thandar_bo , @nansu_yati_soe , @panyaungchel , @isabella_victor , @emerald.nyein
"ချဉ်ခြင်းတက်တာ ထူးခြားတာက အရင်တုန်းက သူက ပုဇွန်တွေ၊ Seafood တွေ
အရမ်းကြိုက်တာ။ ကျွန်တော်က ပင်လယ်နားက လာပြီး သိပ်မစားဘူး။
ကျွန်တော်က ဝက်သား၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥအရမ်းကြိုက်တာ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ သူပဲ အဲဒါကြိုက်တော့တယ်။ သူက ပုဇွန်ဆိုရင် အနံ့တောင် မခံနိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်က လွှတ်စားတာ။ နွားနို့လည်း ကျွန်တော်ပဲ သောက်တယ်။ ချဉ်ခြင်းတက်တာက ဗြောင်းဗြန်တွေဖြစ်ကုန်တာ အတော်အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်" လို့ သားလေး ကိုယ်ဝန်နဲ့တုန်းက ချဉ်ခြင်းတက်ပုံကို ပြောပြတဲ့ Fokker
အဆိုတော် Fokker ရဲ့ သားဦးလေးကို သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ လောလောဆယ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်ကောက်နေကြတယ်လို့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းအမူ အရာလေးနဲ့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံခဲ့တဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ချစ်သူက မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ ပြောပြ ခဲ့ပါသေးတယ်။ '' သူပြောရဲ့သားနဲ့ ဒီလိုမျိုးတွေဝတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်။လောလောဆယ်တော့ စိတ်ကောက်ထားကြတယ်။ ချစ်တဲ့သူကျတော့ လည်း ကိုယ့်ကိုချစ်ပြီး တန်ဖိုးထားတော့ဒီလိုမျိုးတွေ ဘယ်လိုလုပ် ဝတ်စေချင်မလဲပေါ့။ နေ့တိုင်းHoidy ကြီးတွေ ဝတ်ပြီး ဘောင်းဘီအရှည် ပွပွကြီးနဲ့ နေစေချင်တာပေါ့။ကိုယ်က မင်းသမီးဆိုတော့လည်း အချိန်ပြည့်ဝတ်လို့ဘယ်ရမလဲ ဒီလိုပဲ ညှိယူရတာပေါ့နော်'' လို့ သူကဆိုပါတယ်။
"နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အဓိကထားပြီး ဗျူးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍပေါ့။ မြတ်နိုးတို့ကို မေးတော့ ဂျပန်လိုမေးတာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဘာသာပြန်တော့ ရှိတယ်" လို့ဆိုရင် ဂျပန်စာစောင်အတွက် အင်တာဗျူးဖြေခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး
"ဒီနေ့ အမှတ်တရလေးကတော့ အစ်ကို့မိသားစုလည်း ရှိတယ်၊ အစ်ကို့အမေနဲ့ အဖေလည်း လာမယ်လို့ ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဝမ်းသာတယ်။ မပန်နဲ့ယူတော့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာတာ ၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ သင်္ကန်းစည်းတဲ့အချိန်မှာ ဝိနည်းနဲ့အညီ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်" လို့ မွေးနေ့ကစလို့ သင်္ကန်း ၇ ရက်ဝတ်မယ့် ဆုပန်ထွာရဲ့ခင်ပွန်း ကိုဥက္ကာကျော်
မအားလပ်လို့ မွေးနေ့ပွဲ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ချစ်ခင်သူတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကြောင့် မွေးနေ့မှာပျော်ခဲ့ရတဲ့ ဝင့်ယမုံနိုင်
"အရင်အဆင်ပြေတုန်းကဆို အဖေ့ကို ပိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်။ ကိုယ့်အမတွေ ကိုယ့်တူမတွေကို ထောက်ပံ့နိုင်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ ကားရိုက်ကျပ်လာတယ်" လို့ ဇာတ်ကားသိပ်မရိုက်ရတော့တဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ယွန်းရွှေရည်
Photo - @tyron_bejay , @angel_lamung, @charliekelen , @maymyatnoe_may , @nyein_thaw
"ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေးသေးလေးပါလားဆိုပြီး တွေးမိတယ် သင်ဇာလည်း ငွေ၅သိန်းလှူခဲ့ပါတယ်" - သင်ဇာဝင့်ကျော်
သရုပ်ဆောင် ဆုမြတ်နိုးဦးဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ သတင်းစာစောင် တစ်ခုမှာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အဓိကထားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ အင်တာဗျူးစာမျက်နှာအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေတဆင့် ရရှိလာတဲ့ ဗဟုသုတတွေကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ '' သူတို့ရေးထားတဲ့ သတင်းတွေ ပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်စရောက်သွားတဲ့ အချိန်ကစပြီး အင်တာဗျူးမေးတဲ့ အချိန်အထိပေါ့။ သူတို့ဘက်က အမြင်ရော၊ ကိုယ့်ဘက်က အမြင်ကိုရော ရေးထားတာပေါ့။ ဗဟုသုတတော့ရတယ်၊ ကိုယ်က တစ်ခါတလေဆို လက်လွှတ် စပါယ် နေလိုက်တာဆိုတော့ သူတို့ကလည်း ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားလုံးတိုင်းကို မှတ်ထားတယ်'' လို့ ဆိုပါတယ်။
"လူဆိုတာ အမှားနဲ့ မကင်းဘူးလေ။ နောက်ဆို အမှားမဖြစ်အောင် ကိုယ့်ဘက်က ပိုပြီးဆင်ခြင်သွားနိုင်တာပေါ့နော်။ နောက်ဆို နှစ်ဆ ဆင်ခြင်ရမှာပေါ့" လို့ ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ဖွေးဖွေးနဲ့ဆုံရင် စားနေကြတာပဲ ဖွေးဖွေးက ရှုတင်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်စားနေတာ
ဆိုပြီး ဖွေးဖွေးနဲ့အမှတ်တရတွေ အကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည် .
ကောင်လေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေ လေ ဆိုပြီးအရွှန်းဖောက် ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ အပျိုကြီးမမ နွေးနွေးချစ်ဖွယ် .
Photo - @wutthmoneshweyii , @warsomoeoo , @jessicadada , @han_lay_lay , @thinzarwintkyaw
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုလှလှလာတဲ့ ခြည်ခြည်....
သမီးလေးကို ၀န်းရံကြတာ သဘာဝကျပါတယ် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဒိုရာအဲလက်စ် အကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ အဆိုတော် အဲလက်စ် .
မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးချောလေး ကာရာဗီ က သူသဘောကျတဲ့ ကောင်လေးမျိုးကို ရင်ဖွင့် ပြောပြလာပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသားတွေက အရမ်းကို သဘောကောင်းပြီး ကြင်နာတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ တစ်ယောက် ယောက် နဲ့သာ ဒိတ်ရမယ်ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်နေတိုးနဲ့ ဒိတ်ချင်တယ်လို့ Duwun Media ကနေ ပြောပြလာပါတယ်။ '' သူက ကြင်နာတတ်တယ်၊ လူကြီးလူကောင်းဆန်တယ်။ သူက စကားသိပ်မပြောဘူး၊ ကျွန်မ နဲ့ သိပ်မသိလို့ ပြောစရာစကား မရှိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ သူက အေးဆေးပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ သူနဲ့ ဒိတ်လို့ရရင် ဒိတ်ချင်ပါတယ်။ သူ သဘောကျအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစား မယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသိပေမယ့် အလုပ်အတူ တွဲလုပ်နိုင်မှာပါ'' လို့ ဆိုပါတယ်။
လိမ်လိမ်မာမာနေရင် ဒီထက်ပိုလှမှာလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း
၄ယောက်လုံးအရင်နဲ့မတူတော့တာက တော့ Weight ပေါ့ ။ဆုံရင်တော့ကိုယ့်ဘ၀အကြောင်းလေးတွေ ပြန်ပြောဖြစ်ကြတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း ရေဗက္ကာဝင်း၊ခင်ဘုဏ်း၊ယှုဇန၊မေစံပယ်ညို တို့၎ယောက်ရဲ့ သီချင်းလေးကိုလည်း ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော် .
ကဲ.............အဝင်းကို အဖွားဖြစ်သူက အိမ်ထောင် မပြုစေချင်သေးဘူးတဲ့
"ဒီလိုအခြေအနေထိ ရောက်အောင် ပို့ပေးခဲ့တဲ့ အားပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေ အကုန်လုံးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားသလောက်ထိ မဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်း ဒီကနေတောင်းပန်ပါတယ်" လို့ဆိုတဲ့ နေခန့်မင်းသစ်
Photo - @myatlay8686 , @nwedarlihtun , @iamsumyatnoekyaw , @msenglu , @_alice_ong_
ထိုင်းမင်းသမီးလေး ကာရာဗီရဲ့ မြန်မာအမျိုးသားတွေအပေါ်အမြင်ကို မေးမြန်းချိန်မှာ..
"အဲဒါက ရွေးရအရမ်းခက်တယ်။ မြန်မာအမျိုးသားအများစုက သဘောအရမ်းကောင်းပြီး ကြင်နာတတ်ပါတယ်" တဲ့
နေတိုးနဲ့ ဒိတ်ချင်လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို သူမဘယ်လို တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်...
မကြာခင်က ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အဆိုတော် ဝိုင်းလေး သေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းက ပျံ့နှံသွားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားမှာလည်း တကယ်ကို ထိတ်လန့် စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝိုင်းလေးကြောင့် သရုပ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါ တစ်ယောက် အရမ်းကို လန့် သွားခဲ့ရတယ်လို့ Duwun Media ကနေပြောပြလာပါတယ်။ '' ညီမနိုးလာတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဝိုင်းလေးရဲ့ မိတ်ကပ်ဆရာ လီလီက တင်ထားတော့ တကယ်ကြီးလားပေါ့။ ဖုန်းဆက်တာလည်း မကိုင်ဘူးတဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ညီမလည်း ဝိုင်းလေးဆီ ဖုန်းဆက် တော့ မကိုင်ဘူး၊ ဝိုင်းလေး အမေဆီဖုန်းဆက်တော့လည်း မအားဘူးဆိုတော့ အရမ်းကို စိတ်ပူသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီလည်း ဖုန်းဆက်ပြီး သတင်းသွားမေးကြဖို့တောင် စီစဉ်ထားတာ'' လို့ သူကဆိုပါတယ်။